नेइमार र कोटिन्हो पहिले नै रियल मड्रिडबाट खेल्न चाहन्थे -हेर्नुहोस् दुवैको चाहना « Postpati – News For All
नेइमार र कोटिन्हो पहिले नै रियल मड्रिडबाट खेल्न चाहन्थे -हेर्नुहोस् दुवैको चाहना
भदौ १४ – अहिले विश्व फुटबलमा नेइमार र कोटिन्हो चर्चामा रहेका छन् । बार्सिलोनाबाट पिएसजी गएका नेइमार र लिभरपुलबाट बार्सिलोनामा आउने चर्चा चलेका कोटिन्होले सबैको ध्यान तानेका छन् ।
तर धेरैलाई थाहा नभएको र रमाइलो कुरा के छ भने उनीहरु दुबै कुनै समय स्पेनी क्लब रियल मड्रिडबाट खेल्ने सपना देखेका थिए । नेइमार बार्सिलोना छोडेर पिएसजीमा गएपछि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै विश्व फुटबलमा स्टार खेलाडीको रुपमा उदाउने लक्षण देखाएका छन् । उता लिभरपुलबाट खेलिरहेका कोटिन्होलाई बार्सिलोनाले भित्र्याउने तयारी गरेको छ ।
नेइमार र कोटिन्हो निकै नै मिल्ने साथी पनि हुन् । उनीहरुको पहिलो भेट सन् २००८ मा भएको थियो । १६ वर्षमुनिको विश्वकपको खेलको बेला उनीहरुको भेट भएको थियो । पत्रकार डेभिड रुइजले त्यति बेला नै यी दुई खेलाडीसँग उनीहरुको भविष्यको चाहनाका बारेमा कुरा गरेका थिए । दुबैले आफूहरु रियल मड्रिडबाट खेल्न चाहेको बताएका थिए ।
तपाईँको ड्रिम क्लब कुन हो ?
कोटिन्हो : रियल मड्रिड । यो विश्वकै उत्कृष्ट टिम हो ।
नेइमार : रियल मड्रिड ।
तपाईँको आइडल प्लेयर को हुन् ?
कोटिन्हो : मैले बाइसाइकल किक रोबिन्होबाट सिकेको हो । म रियल मड्रिड र बार्सिलोनाका खेल हेर्न मन पराउँछु ।
नेइमार : म सात वर्षकै हुँदा सान्तोसमा आवद्ध भएको हुँ । मैले टेलिभिजनमा रोबिन्होका खेलहरु हेरेँ र उनको खेल शैली नक्कल गर्न खोजेँ । मलाई स्पेनी फुटबल पनि मन पर्छ । उनीहरु आकर्षक फुटबल खेल्छन् । उनीहरु छिटो पनि खेल्छन् अनि गुणस्तरीय पनि ।
तपाईँको लक्ष्य के छ त ?
कोटिन्हो : स्पेनिस लिग, किनकी त्यहाँ विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी रोबिन्हो र रोनाल्डिन्हो रहेका छन् ।
नेइमार : स्पेनिस लिग नै । त्यहाँ विश्वकै उत्कृष्ट फुटबल खेलाडी रहेका छन् र शानदार खेल प्रस्तुत गर्दछन् ।